Fanafihana “cash point” – Ampasanimahalo: nitifitra ireo jiolahy, olona iray naratra, lasa ny vola 10 tapitrisa Ar | NewsMada
Nipoaka indray ny basy teny Ampasanimahalo, ny asabotsy tolakandro teo. Ankoatra ny volabe tokony hatao ”versement” mitentina 10 tapitrisa Ar voaroba, naratra voatifitra teo amin’ny kibony ny tovolahy iray miasa amina ”cash point” iray. Telolahy, tsy nanao sarontava ireo jiolahy nahavanona izany
Finday miisa 19 miampy vola manodidina ny 10 Tapitrisa Ar, voangona tao anatin’ny iray andro no indray voaroban’ny jiolahy miisa telo tsy nisaron-tava teny Ampasanimalo Ambodimanga, ny asabotsy teo tokony ho tamin’ny 03 ora tolokandro. Ary mpianadahy mpanao « Cash point » sy « taxiphone » eny Mausolée no lasibatr’ireo jiolahy tamin’izany. Handeha hanao versement ary hamonjy fodiana izy mianadahy ireo, izao lasibatry ny fanafihana izao. Araka ny fantatra, tojo tsy fahasalamana ralehilahy ka nanapaka-hevitra ny ody ny tolakandro kinanjo niandrasan’izy telo lahy teo am-pipetrahana teny amin’ny sisin-dalana teny an-toerana. Vao tazan’ireo jiolahy ireo tompona cash point, avy hatrany dia nitifitra ilay lehilahy izy ireo ka voa teo amin’ny takibany ity farany, ny moto kosa nidona tamina sisin-tamboho fanitso ka nidaraboka tamin’ny tany. Teo no ho eo, ireo jiolahy no nandroba ny kitapo nisy ny vola sy ireo finday rehetra teny am-baben-dralehilahy. Nanaitra ny manodidina anefa ny feom-basy teny an-toerana ary nisy tamin’izy ireo nanatona nijery ny zava-misy ka voambana basy avy hatrany. Manoloana izany, nanao tifi-danitra indroa nisesy ireo jiolahy ho fampitahorana ny olona ka nirifatra nitsoaka, nihazakazaka mafy namonjy an’ireo elakela-trano samihafa eny Ampasanimalo, hoy ny nanatri-maso iray.
Mbola tsy nahatsiarotena…
Taorian’ny loza, nalefa vonjimaika tao amin’ny hopitalin’ny “Mpitsabo mikambana” eny Ampasanimalo ilay lehilahy voatifitra. Tsy vita tao anefa ny fitsaboana azy noho ny bala izay tafiditra lalina ka nalefa teny amin’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona Ampefiloha. Raha ny fantatra, ny asabotsy io, dia mbola tao amin’ny sampana fameloman’aina ralehilahy raha tsy naninona kosa ilay vehivavy nandritra ny fanafihana.
Mpitandro filaminana maro no tonga teny Ampasanimalo, taorian’ny tranga ary tsy nahatratra intsony ireo mpanao ratsy. Naverin’ilay vehivavy tamin’izy ireo ny fisehoan’ilay fanafihana ary misokatra avy hatrany ny famotorana. Hatreto, hoy ny loharanbom-baovao, mbola tsy milsy olona voasaringotra tamin’ilay fanafihana.